Abụọ-usoro kọmputa ewepụghị-akpa igwe - China Taizhou Boding Machinery
DZ252S bụ 52 sentimita asatọ na otu ajụjụ abụọ na usoro otu ala, devicde na elu-ọkwá ala izute erughị ala chọrọ ka ele mmadụ anya n'ihu akpa .Equipped na infrared ịchọputa mkpu usoro, nwere ike n'ụzọ dị irè na-ezere na-efu na oti mkpu ma agịga hit. Nke a deviced na smart omume na infrared mmetụta naanị ịchọpụta-akpa ebe izere enweteghi egwu. Tụgharịa azụ nkwonkwo-achịkwa site n'itinyekwu moto, dịkwuo ajụjụ nloghachi ọsọ na arụpụtaghị nakwa dị ka izere eyi nke ...
DZ252S bụ 52 sentimita asatọ na otu ajụjụ abụọ na usoro otu ala, devicde na elu-ọkwá ala izute erughị ala chọrọ ka ele mmadụ anya n'ihu akpa .Equipped na infrared ịchọputa mkpu usoro, nwere ike n'ụzọ dị irè na-ezere na-efu na oti mkpu ma agịga hit. Nke a deviced na smart omume na infrared mmetụta naanị ịchọpụta-akpa ebe izere enweteghi egwu. Tụgharịa azụ nkwonkwo-achịkwa site n'itinyekwu moto, dịkwuo ajụjụ nloghachi ọsọ na arụpụtaghị nakwa dị ka izere eyi nke e ji ebu ihe okporo ígwè.
Na dijitalụ technology, mezuo ihe nakawa etu esi nke nyefe, pointel, Tuck, intarsia, Jacquard, abụọ jersery larịị, o udi zoro ezo udi na ndị ọzọ mgbe nile ụkpụrụ akpa ọrụ. Ikpa efe isi otu ma ọ bụ abụọ Jersey, oge ufodu multi-agba Jacquard, intarsia, Gịnị, pointel ákwà. Adabara silk, chemical eriri, ajị, acrlic eriri, weere yarn, owu yarn idu efe na sweta, olu akwa, placket, hem, cuff, ịchafụ, n'akpa uwe, ogologo ọkpa, na ndị ọzọ na-akpa ákwà.
nlele 5 / 7G 7G 9G 10G 12G 14G 16G
Agịga / Obosara 364needles / 52inches 364needles / 52inches 468needles / 52inches 520needles / 52inches 624needle / 52inches 728needles / 52inches 832needles / 52inches
Main Function Ikpa efe isi otu ma ọ bụ abụọ Jersey, oge ufodu multi-agba, Jacquard, intarsia, Gịnị, pointel ákwà adabara silk, chemical eriri, ajị acrylic eriri, weere yarn, owu yarn idu efe na sweta, olu akwa, placket, hem, cuff, ịchafụ , n'akpa uwe, ogologo ọkpa, na, ndị ọzọ ala na-akpa ákwà.
knitting System Single ajụjụ abụọ na usoro ma ọ bụ atọ na usoro, na dijitalụ technology, mezuo ihe nakawa etu esi nke nyefe, pointel, Tuck, intarsia, Jacquard, abụọ jersery Araba, appaent udi, zoro ezo udi na ndị ọzọ mgbe nile ụkpụrụ Knitting ọrụ.
knitting Speed Max akpa ọsọ 1.6M / S. 32 ọsọ ngalaba achịkwa servo moto.
Dynamic stitch Deviced site ike stitch technology, nweta iche iche stitches na otu N'ezie na dịgasị iche iche njupụta otu N'ezie mma kniing efficency na dịgasị iche iche.
ọgịrịga nyefe Free transter abụọ ụzọ n'etiti n'ihu na azụ eedle na n'otu oge ahụ na dịghị mmachi site ajụjụ ije. Nyefee na ikpa efe n'otu n'otu.
Single Ma ọ bụ ugboro abụọ Rackings Motor drive atụ egwu, nweta 1/2 ma ọ bụ 1/4 agịga erughị ala mgbe ọ bụla ọnọdụ. Ugboro abụọ acking max 2.5 sentimita asatọ otu akụkụ na abụọ n'akụkụ max 5 sentimita asatọ, deviced on 5G, 7G, na 5 / 7G igwe. Single erughị ala max 2inches, deviced on 9G, 12G, 14G, na 16G igwe.
High Speed ​​Lọghachinụ Tụgharịa azụ joine achịkwa site n'itinyekwu moto, dịkwuo ajụjụ nloghachi ọsọ na productiviy nakwa dị ka izere eyi nke e ji ebu ihe okporo ígwè.
ala Device DZ252S deviced na wetuo mbo na elu-ọkwá ala, DZ252S deviced na elu-ọkwá oller; 24sections nke akpaka akara na subsection ukpụhọde .Fulfil zuru okè tak ala nke ákwà na erughị ala chọrọ ka portionable knitting.
agịga Detector Onwem na infrared ịchọputa mkpu usoro, nwere ike n'ụzọ dị irè na-ezere na-efu na oti mkpu ma agịga hit.
Dimension (Ugboro abụọ usoro) L * W * H 2915 * 940 * 2010mm, (Three usoro) L * W * H3015 * 940 * 2010mm
Previous: Single-usoro kọmputa ewepụghị-akpa igwe
Next: Atọ-usoro akpụkpọ ụkwụ elu vamp Ndinam igwe
6f 144n kọmputa sock Setting Machine
Auto ewepụghị ikpa efe Machine
Auto n'ikiri ụkwụ Upper-adịgide adịgide Machine
Automatic Enweghị nsogbu uwe Knitting Machine
Backpart Nkedo Machine
Kapetị Knitting Machine
Cheap Price Machine N'ihi Home Iji
olu akwa Ewepụghị Knitting Machine
Olu akwa Ime Machine
Compuiter sweta Machine
Computeized Ewepụghị Knitting Machine
Computer achịkwa Knitting Machine
Computer Ewepụghị ikpa efe Machine na Sinker
Computer Ewepụghị Knitting Machine
Computer Ewepụghị Knitting Machine N'ihi N'ogbe
Computer Ewepụghị Machine
Computer Ewepụghị sock Knitting Machine
kọmputa Ewepụghị ndina Knitting Machine
kọmputa ịchafụ Ewepụghị ikpa efe Machine
Kọmputa ịkpa ákwà Machines
Sịlịnda Die Ịcha Press Machine
ugboro abụọ System Computer Ewepụghị Knitting Machine
Fabric N'ihi sweta Ime Machine
Ewepụghị Kintting Machine
Ewepụghị ikpa efe Machine na Sinker
Ewepụghị Knitting Machine N'ihi Textile Industry
Ewepụghị Knitting Machine na Good Nye
Ewepụghị Knitting Style Knitting Machine
Ewepụghị Single Jersey Knitting Machine
Ewepụghị sock Knitting Machine
Full Computer ewepụghị Knitting Machine
Ofụri Esịt Jacquard Ewepụghị ndina Knitting Machine
Ofụri Esịt Jacquard Ewepụghị ikpa efe Machine
Ofụri Esịt Knitting Machine
uwe Knitting Machine
Good Quality sweta Computer Knitting Machine
okpu Knitting Machine
Okpu Ime Machine
Okpomọkụ Setting Machine
Home kọmputa Knitting Machines
Kpuchiri ihe n'ihu sweta Ime Machine
Industrial Ewepụghị Knitting Machine
Industrial uwe Ime Machine
Insole nkwekọrita Machine
Machine N'ihi iheukwu Upper
Manual Ewepụghị Knitting Machine
Manual sweta Knitting Machine
Men sweta Polo Ime Machine
Multi Gaug e Industrial Ewepụghị ikpa efe Machine
Ike okpu Machine
Pu Akpụkpọ anụ Embossing Machine
ịchafụ Cap Knitting Machine
ịchafụ Knitting Machine
Akpụkpọ ụkwụ Upper Knitting Machines
Silver Reed Hand Ewepụghị Knitting Machine
Single ajụjụ ugboro abụọ System
Single Ewepụghị Knitting Machine
Single System Ewepụghị Machine
Single-System Computer Ewepụghị Knitting Machine
Stoll Ewepụghị ndina Knitting Machines
eriri Knitting Machine
sweta Computer Knitting Machine
Sweta Men Ime Machine
T uwe elu Printing Machine
Universal Ewepụghị Knitting Machine
Upper attaching Machine
Upper lining attaching Machine
Ajị anụ ịchafụ Ime Machine
Ee Computer Knitting Machine